KUVASZ DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Kuvasz Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Aidan the Kuvasz, qadarin sawir leh ee Kilde's Kennel
Liiska eyda isku dhafan ee Kuvasz Mix
Reer Hungary Kuvasz
Kuvaszok = koo v-ah-sawk
Kuvasz waa ilaaliye adhi ah oo aan baqdin lahayn. Giraanta bandhigga waxaa loo tixgeliyaa qaybta ugu quruxda badan eeyga. Xuubka waa saami u dhigma madaxa. Joojinta ayaa si wanaagsan loo qeexay, ma ahan lama filaan ah. Sanka waa madow oo leh sanka weyn ee sanka. Dibnaha ayaa madow. Dhegaha waa dhumuc weyn yihiin, sifiican dib loogu dhigay, qaabeeya V oo xoogaa wareegsan caarada. Indhaha mugdiga ah ee mugdiga ahi waa qaab yicib u eg, si wanaagsan ayaa loo kala saaraa. Jidhku waa laf-dhexaad dhexdhexaad ah oo waxyar ka dheer dhererkiisa. Dabada ayaa loo qaadayaa meel hoose, oo lama xirayo, ugu yaraan waxay gaaraysaa hocks. Markuu eeygu faraxsan yahay dabada ayaa waxyar kor loo qaadayaa. Cagaha si wanaagsan ayaa loo duubay oo qoyaan ka soo baxa lugaha hore badanaa lama saaro, laakiin kuwa lugaha dambe waa. Qoorta waxay leedahay manjo gaareysa laabta. Timaha ayaa ka gaagaaban cagaha iyo madaxa, laakiin jidhka iyo lugaha way ka laalaaban yihiin waxayna dhererkoodu noqon karaa ugu badnaan 4-6 inji (10-15 cm). Dhererka dhexdhexaadka ah, jaakad laba jibbaaran ayaa ku timid caddaan iyo fool-maroodi. Maqaarku aad ayuu u midabaysan yahay. Koodhku wuxuu noqon karaa mid ka imanaya ruxrux ama toos. Koodhka hoose waa qaro weyn yahay.
Kuvasz waa mid caqli badan wuxuuna noqon karaa eey qoys wanaagsan haddii uu leeyahay milkiileyaal yaqaan sida loo muujiyo a dabiiciga ah, awood adag dusha sare, waa la dhexgalaa, si fiican ayaa loo tababbaray, oo waxaa lala koray carruurta bilowgii, laakiin laguma talinayo qoysaska badankood. Kuvasz waxaa loo soo saaray inuu noqdo ilaaliyaha xoolaha sidaa darteedna waa mid dhul ahaan leh dareen xoog leh oo ilaalin ah. Waa xoolo dhaqato heer sare ah iyo difaaca adhiga yeyda. Waxay samaystaan ​​eeyo waardiye ah oo fiican fudud guriga burburin , laakiin cabirkoodu waa weyn yahay oo dareenkooda difaaca ayaa leh masuuliyad dheeraad ah oo milkiile. Tarankaani wuxuu si adag u difaaci doonaa dadkiisa iyo dhulkiisa. Kuvasz wuxuu u heellan yahay qoyskiisa, isagoo sameysanaya xiriir adag, si kastaba ha noqotee haddii uusan u arkin aadanaha inuu yahay ka maskax adag nafteeda , waxay noqon doontaa mid istaagta xitaa iyaga la jira.
Haddii eeygu la noolaan doono carruurta, waxaa ugu wanaagsan, haddii ay suurtagal tahay, in la doorto kuup Kuvasz ah oo eyga lala koriyo carruurta. Carruurtu waxay u baahan yihiin in la baro sida loo noqdo hoggaamiyeyaasha xirmooyinka. In kasta oo Kuvasz ay si wanaagsan ula xiriiraan carruurta qoyska, carruurta kale waxay u baahan yihiin in lala socdo. Ma doonaysid in Kuvasz-ka uu aamino inuu u baahan yahay inuu ka ilaaliyo ilmahaaga mid kale haddii ay carruurtu isku dhacaan. Waxaa lagugula talinayaa inaadan uga tagin iyaga dabagal la'aan.
cabirka isku darka shaybaarka boston terrier
Sida dhammaan xayawaannada canine, heerka xukunku wuu ku kala duwan yahay eyga ilaa eyga, xitaa isla qashinka. Si kastaba ha noqotee, noocani guud ahaan wuu ka awood badan yahay inta badan sababtoo ah awoodiisa ilaaliyaha adhiga ee hidaha ah. Tani waxay ka dhigan tahay inay u nugul yihiin in lagu meeleeyo shisheeyaha iyo daryeel dheeraad ah ayaa loo baahan yahay bulshada dhexdeeda iyaga, sida ugu wax ku oolka ah markay weli yihiin eey. Ey yaryar waa in ay wax badan qabtaan shisheeyaha. Milkiileyaashu waa inaysan waligood u oggolaan eeyo yaryar inay ku boodaan ama ku calaliyaan aadanaha. Waa in la baraa inay cirib ku cidhib dhigaan hogaanka ilaa bilawga oo ay bartaan inay galaan oo ay ka baxaan dhammaan albaabada iyo albaabbada ka dambeeya aadanaha.
Inkasta oo eeydu ay si fudud u aqbali doonaan dadka iyo xayawaanka cusub, maadaama eeygu korayo tan ayaa is beddeli doonta Eeyaha qaangaarka ah ayaa tijaabin doona awoodda badanaa. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in la dhiso hoggaan bilawga bilowga si aad awood ugu yeelato inaad ula xiriirto eyga da'da yar ee ah inaan loola dagaallamin xayawaanka cusub ee soo galaya guriga oo ay tahay inaad aqbasho dadka aan la aqoon. Ma tababbari kartid dareenka ilaalin ee tarankaani wuxuu ilaalin doonaa gurigaaga haddii ay dareemaan khatar jirta , si kastaba ha noqotee waxaad bari kartaa si loo ixtiraamo awoodaada.
Noocani waa mid geesinimo leh, geesi ah oo aan cabsi lahayn. Waxaa loo soo saaray inay si madax banaan u shaqeeyaan, taas oo macnaheedu yahay inaysan sahlaneyn in la adeeco tareenka. Tababarku waa inuusan waligiis noqon mid adag, laakiin wuxuu u baahan yahay inuu ahaado mid deggan oo adag, oo kalsooni leh qof khibrad badan leh . Maamulaha ayaa u baahan inuu yeesho hawo awood dabiici ah iyaga. Eygan wuxuu u baahan yahay in lagu xakameeyo maskaxda, maahan gacanta. Eyga ayaa raadin doona hogaamiye milkiilayaashuna waxay u baahan yihiin inay ka maskax badnaadaan eeyga. Waxay la noqon doonaan kuwo ula macaamilaya kuwa qabow ama kuwa iska aamusan. Dhammaan xubnaha qoyska waxay u baahan yihiin in la baro sida eyga loola macaamilo midig ka soo baxa eeyaha. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay eeyga baraan inuu aqbalo martida la soo dhoweeyay iyo inuu milkiilaha u eego hoggaamin, halkii eygu ka filanayay inay milkiilayaashu isaga u eegaan hoggaamin. Furaha ugu weyn ee lagu tababbarayo Kuvasz waa in la fahmo dabeecadda taranka sida ilaaliye madax-bannaan. Aad ayey muhiim u tahay in AAN la istcimaalin hababka tababarka adag, laakin aad u dejiso qaabab adag.
Kuvasz oo u shaqeyn doona sidii ilaalada adhiga waxay u baahan yihiin tababar gaar ah. Khabiir ayaa loo yeerayaa si uu u caawiyo haddii aadan aqoon u lahayn howsha. Ey yaryar oo qiyaastii 6 toddobaad jira waa inaysan ku dhex noolaan guriga dadka, laakiin halkii ay la joogi lahaayeen adhiga ayaa loogu yeeri doonaa inay ilaaliyaan, si ay u samaystaan ​​dammaanad. Markii loo sara kiciyo inay u shaqeeyaan sidii ilaaliyaha adhiga ee lagu abtirsaday inay ahaadaan waxay aad ugu sii xirnaan doonaan shisheeyaha iyo dhul ahaan. Tababaraha eyga booliisku wuxuu noqon doonaa nooca tababaraha khaldan ee la isticmaalo. Nooca eeyga booliska ee dabeecaddiisu maaha waxa Kuvasz yahay. Waxay sameystaan ​​eeyo booliis oo cabsi badan maxaa yeelay iyagu aad ayey u madax bannaan yihiin. Waxay xukumaan, adiga maahan, xoogkee lagama maarmaanka u ah xaalad kasta, iyadoo lagu saleynayo waxay aaminsan yihiin. Taasi waxay ka timaaddaa dareen, ka dibna wixii iyaga la baray. Runtii iyagu waa garsoorayaal cajiib ah oo ku saabsan sida ay xaaladdu ugu qasban tahay. Waxaad ubaahantahay inaad 'barto' Kuvasz, ma 'tababbartid' iyaga. Tani macnaheedu maahan inaad jir ahaan ku qasbeyso inaad fahamto in 'aragti' ay tahay waxa abuuraya xukunka. Isla Kuvasz kaas oo kaxayn doona yey, orso, iwm, isagoon ka labalabeyn, ayaa istaagi doona berrinka, isagoo ka caawin doona lax sidii loo bixin lahaa foosha iyo hubinta in wanku heli karo hooyadeed. Furaha horudhaca guusha ee ilaalinta xoolaha waxay umuuqataa inuu yahay eey khibrad weyn leh oo hagaya eeyaha. Haddii kale, markaa milkiiluhu shaqadiisa ayuu u goyn doonaa lixda bilood ee ugu horreysa illaa sanadka. Waxaad u baahan doontaa dulqaad badan iyo xoogaa tilmaam ah dadka kale ee khibrada leh. Markii lagu xidho xoolaha, Kuvasz wuxuu hubinayaa in waxna, weligood, waxyeello u gaysan karin iyaga. Taasi waa dabeecadooda. Waa faahfaahinta jidka isku dheelitirka (geeddi-socodka koritaanka) ee culeys ku ah milkiilaha.
Dhererka: Ragga 28 - 30 inji (71 - 76 cm) Dumarka 26 - 28 inji (66 - 71 cm)
Miisaanka: Ragga 100 - 115 rodol (45 - 52 kg) Dumarka 70 - 90 rodol (32 - 41 kg)
U janjeersa dysplasia sinta (ka hubi abuurkaaga si aad u hubiso in waalidku leeyihiin nadiifinta sinta). Qaar ka mid ah arrimaha yaryar waa osteochondritis dissecans (cudur sababa lameness ka yimaada caabuqyada xubnaha garabka), hypertrophic osteodystrophy, dhibaatooyinka maqaarka iyo falcelinta xasaasiyadda. Noocan ayaa laga yaabaa inuu hoos u dhaco oo caajis noqdo.
Kuvasz laguma talinayo nolosha guriga. Waa mid si firfircoon gudaha uga shaqeeya oo ugu fiican ugu yaraan leh daarad weyn. Ha uga tagin eeygan kaligiis ardaaga guriga muddo dheer, maxaa yeelay wuxuu noqon karaa mid wax dumiya. Jimicsiga adag waa inuu ka caawiyaa tan. Kuvasz marna waa inaan looga tagin banaanka dhammaantiis isagoo xiran, maxaa yeelay taasi waxay u horseedi kartaa xumaan. Waxay ku fiicnaan doontaa dayrka weyn ee ku lifaaqan. Waxay si gaar ah ugu raaxeysataa cimilada qabow waxayna ku noolaan kartaa banaanka jawiga qabow illaa cimilada illaa iyo inta ay leedahay aqal ey leedahay iyo biyo macaan, laakiin waxay ku fiicnaan doontaa haddii loo oggolaado gelitaanka guriga iyo deyrka labadaba. Koodhka qaro weyn ee Kuvasz wuxuu isaga ka dhigayaa mid aan ku raaxeysanayn cimilada diirran ama xaaladaha qoyan waa inay had iyo jeer leedahay hoos iyo fara badan oo biyo macaan.
Kuvasz wuxuu u baahan yahay jimicsi maalinle ah oo xoog leh. Haddii aysan si firfircoon uga shaqeyneynin sida ilaaliyaha adhiga ah waxay u baahan tahay in la qaato maalin kasta, dheer socod socod ama orod. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Jimicsiga waa inuu ka caawiyaa calaalinta ama qodista dhibaatooyinka - iyadoo la rajeynayo inay ku daaleyso eyga.
casaan qalalan sheyler puppy puppy
Dharka qaro weyn ee dhexdhexaadka ah ee Kuvasz waa in la caddeeyo toddobaadle. Iska ilaali maydhashada noockan, maaddaama jaakaddu si dabiici ah u daadiso wasakhda qubeyskuna ay ka saarto saliidaha siinaya jaakadda gurigan. In badan oo aad u maydho eeygan ayaa u baahan doonta in la maydho! Halkii laga maydhan lahaa, eeyga waa in si joogto ah loo cadaydaa. Dadka qaarkiis waxay ku xoqaan budada talcum ama budada galleyda ah jaakada ka dibna mar kale ayey u cadayaan sidii xeelad nadiifin ah. Ka hubi dhegaha gadaashiisa si aad uhesho Cimilada qabow waxay daadin doontaa oo keliya xilli ahaan, laakiin cimilada kulul, waxay u badan tahay inay daadsan tahay sannadka oo dhan.
Kuvasz wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Tibet, laakiin wuxuu ku kobcay taranka maanta waa Hungary. Qorayaasha qaar waxay ku andacoodaan in Kuvasz la yaqaanay ilaa da'da Huns. Qaar kale waxay ku sifeeyaan inay ahayd ido ay wehelinayeen qaxootiga Turkiga iyo adhigoodii oo ka soo qaxay Mongoliyadii una soo qaxay Hungary sanadkii 1200. Magaceeda oo ah turki ayaa macnihiisu yahay 'ilaaliye.' Eyga waxaa lahaa boqortooyo qarnigii shan iyo tobnaad ee maxkamadda King Matyas I, oo noolaa intii u dhaxeysay 1458-1490. Boqorka wuxuu ku andacooday inuu kaliya aaminay eeyadiisa Kuvasz ee uusan dadka aaminin. Kuvasz badiyaa waxaa lasiin jiray hadiyado boqortooyo. Dhimashadii Boqorka, Kuvasz wuxuu ku noqday inuu noqdo ilaaliye adhi intii lagu jiray xilliyadii dhexe. Waxaa sidoo kale loo adeegsaday ugaarsiga ugaadha waaweyn sida xayawaanka duurjoogta ah iyo orsada. Sida xoolaleyda Hangari ay ula safreen lo'dooda iyo eeyohooda, Kuvasz wuxuu ku darsaday horumarka Maremma Sheepdog , Pyrenees weyn , Polish Tatra Sheepdog iyo Adhijirka reer Anatolia , kuwaas oo dhammaantood ah ilaalada adhiga . Dhamaadkii Dagaalkii Dunida niriggu wuxuu ku dhowaaday bakhtiyey . Wax yar oo ka mid ah kuwa wax soo saara ayaa ka shaqeeyay sidii ay dib ugu soo ceshan lahaayeen nambarka lambarro aamin ah
sawirada boqorka cavalier charles spaniel
KCA = Kuvasz Naadiga Mareykanka
Aidan the Kuvasz oo wata mid ka mid ah ragga labka ah - sawir waxaa iska leh Kilde's Kennel
Nic iyo ilaaliyayaashiisa Kuvasz Beauty iyo Aidan — waxaa iska leh xurmada Kilde's Kennel
Lahaanshaha sawirka Kilde's Kennel
Kuvasz eey - Lahaanshaha sawirka Kilde's Kennel
Kani waa Tirza oo taagan Remi sida eey. Lahaanshaha sawirka Steve Kovacs
Kuvaszkan quruxda badan waxaa loogu magac daray Denali. Lahaanshaha sawirka eeyaha & Naqshadaha
Tani waa Denali sida eey yar oo jirta 8 toddobaad. Lahaanshaha sawirka eeyaha & Naqshadaha
Liiska Eeyaha Nooca Eyda
Jarmalka adhijir isku darka belgian malinois
shaybaarka madow ee retriever dahabka qas dhallaanka
madow iyo cadaan yar yar oo cockapoo ah
Yorkshire Pit madow iyo caddaan